musha > Travel Europe > The Best Ski Resorts To Visit By Train
Hapana kunzwa nani pane kudonha avete zvinyoronyoro kutamira chitima uye uchimuka mangwana nenguva yako kuenda, zvadzo maminitsi kubva mawere. In Europe, isu takapambwa kusarudza. Haisi chete nzendo neusiku kuti vari nzira yakanaka skiers, zvisinei. Kune inofa plesieroorde unogona kusvika kubva kubudikidza masikati njanji okufamba nzendo kuti, musuo nesuo, vari pamusoro sezvo kutsanya sezvo ndege.
Heano edu ekutora mamwe emakanakisa eSales Ski nzvimbo yekushanyira nechitima:
State plesieroorde kuzoshanyira nechitima 1 – WENGEN, Siwizarendi
Mujinga kuti unoshamisa Jungfrau wemakomo eJudhiya ndiye Wengen, Vakamupfekedza Zvikwenzi musha mumwe ari Bernese Oberland. Vanozopinda chii sokuti kare apo kugara mumusha. Iyi ndiyo nzvimbo yakakwana kuti kuunza vana rayo mhuri-ushamwari aone uye yakaderera-pfungwa Nightlife. Kwete kupinda Skiing? Hapana dambudziko! Non-the mabasa zvinosanganisira "kutiza-Kuona" neherikoputa, waHeri-Skiing, uyewo 20km yechando kufamba mudungwe munzira, sere Curling rinks, uye makiromita toboggan Zara.
plesieroorde Three, Grindelwald, Wengen, uye Murren, vari kufukidzwa Jungfrau remunharaunda chikwidzo zvichipfuura. Inguva yechando ruzivo kurota!
Nechitima: Paunenge uchikwanisa kufamba the chitima kubva London St. Pancras neEurostar kuenda kuWengen kune huwandu hweshanduko. Kana uri parwendo nemhuri yako, isu dzinorumbidza kuwana kutizira Bern kana Zurich. kubva ipapo, tora zvakananga chitima kubatana Via Bern kuna Interlaken OST uye zvichienda mberi kusvikira Lauterbrunnen. The last bit of the journey is reachable chete rails kubva Lauterbrunnen uye zvinotora chete 15 maminitsi.
State plesieroorde kuzoshanyira nechitima 2 – ko, Ositiriya
Tingaita sei kutaura Skiing pasina kusanganisira Ositiriya? The SkiWelt nharaunda, zvikuru sei, ndizvo mukare! Musha Soll Unozviti 284km kubva state Zara Dziine 77 ichiitirwa Alpine mumatumba uye après nembariro. Nakidzwa chokunwa pamwe nemaonero pamusoro Wilder Kaiser gomo siyana pashure usiku the. Ehe, iwe verenga zvakanaka kuti. Nakidzwa vamwe wakarebesa floodlit toboggan Zara muEurope panguva Hexenritt uye Mond zvakare!
Ibvai London St Pancras pamusoro 15:04 Eurostar kuna kweBrussels, kusvika 18:05; kutora 18:25 Ice kubva kweBrussels kuna Cologne, kusvika 20:15; ipapo utore 21:21 NightJet akarara chitima kuenda Worgl, kusvika 08:36; kubva ipapo zviri pamusoro 20 maminitsi nebhazi kana tekisi.
Total rwendo nguva: 16 maawa 22 maminitsi.
Graz kuna Worgl Zvitima
Salzburg kuti Worgl Zvitima
Vienna kuti Worgl Zvitima
KuCologne Worgl Zvitima
chitima chedu okupedzisira pfungwa – Sauze d'Oulx, Itari
Kana zvinowanikwa pana Skiing, ndokubva the Best Ski plesieroorde kushanyira nechitima chichava Sauze d'Oulx nharaunda. Kana chando Falls minda upfu pakati pemiti here kupinda dzavo. Mumhepo mumusha uri mafaro uye kugamuchira uye mudano dzomumusha vekare cobbled zvechokwadi inowedzera yakanaka ikabatwa kune ushingi.
enda London St Pancras pane iyo 9:24 ndiri Eurostar kuParis Nord, chinja chiteshi netekisi, uye tora iyo 2:41 pm TGV kubva Paris-Lyon kuna Oulx, kusvika pa 7:23 pm. Kubva ipapo zviri 15 maminitsi nebhazi kana tekisi.
Views eumambo penzvimbo Lac weZimbabwe Bourget, mumwe France guru munyanza.
Milan kuti Oulx Zvitima
Turin kuti Oulx Zvitima
KuGenoa kuti Oulx Zvitima
Parma kuti Oulx Zvitima
Wati kare yakazara bhegi rako? Kugona! nekuti ndicho chakaomesesa chikamu rwendo arongwe kunze. Mugshot chitima yako achatora zvawo kwemaminitsi, pasina arun yechikoro! Zvinofadza! kushanya Save A Train ikozvino uye bhuku zororo rehupenyu hwese.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fski-resorts-visit-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#the europeantravel europetravel longtrainjourneys Skiing chando chitima mazano Train Travel